AH BR B BLỌ
Nzuzo di oke uto
Nyochaa Mgbasa Ozi
Na-eche n'ime Mmemme
FEELM = Ezigbo Na-eche + Gbasara Film
FEELM bụ omiiko banyere melite vaping ahụmahụ nke okenye na-akersụ sịga na otutu vaping technology na ngwaọrụ. Na ijikọta Ihe Nkiri Igwe na Onye Na-eduzi Efere, teknụzụ a na-agbanwe agbanwe bụ ihe nrịba ama na ọdịnala ọdịnala na Sayensị Ọdịdị, na-anọchite anya ókèala ọhụrụ na ụlọ ọrụ atomization vaping.
FEELM zuru oke kwekọrọ na Teknụzụ Vaping Technology na Emechi Pod System, na-eweta ezigbo uto na ahụmịhe pụrụ iche na ndị na-anụ sịga sịga, yana ị smokingụ sịga na-adị maka ndị toro eto.
E mepụtara nkà na ụzụ FEELM na 2016 site na SMOORE International Holdings Limited (Stock Code: 6969.HK), ụlọ ọrụ nne na nna nke VAPORESSO, CCELL na METEX.
Ikike niile nke uwa
Ekekọrịta Ahịa Globalwa
AKW MKWỌ NDIL ỌZỌ
• SMOORE tọrọ ntọala
• NJOY rụkọrọ ọrụ, ewebata EZE
• Altria rụkọrọ ọrụ ọnụ, wuru ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ MarkTen
• Deployed Industry-eduga R&D Center, na-elekwasị anya Efere Heating Technology
• mepụtara 1st ọgbọ Efere eriri igwe T28
• Guzobe SMOORE Changsha Research Institute
• Amalitere T29 Metallic Film Ceramic Coil
• Guzosie Ike Slọ Ọrụ Nyocha Shenzhen
• Imekọrịta na RJ Reynolds, malitere Vuse Alto
• Imekota na BAT, ulo oru Vype ePod
• RELX rụkọrọ ọrụ, wepụtara RELX Classic na China
• Ulo oru NJOY ACE
• N'ụwa niile ka a mara ọkwa Heating Technology ika FEELM, merie Golden Leaf Awards
• Ọnụ ahịa nke FEELM n'ime pods karịrị 100 Nde
• A tọhapụrụ "FEELM n'ime" ụghalaahia Teknụzụ Global Technology
• Co-wuru Ewa Kachasi E-cig Nanị Factory na RELX
• Ike imepụta FEELM n'ime pods karịrị 1 Ijeri iberibe
• Ceramic Heating Technology nwetara 1st China Patent Excellence Award na ụlọ ọrụ ahụ
• SMOORE Analysis na Ule Center gafere CNAS nyocha ule
• Guzobe SMOORE Tangshan Research Institute
• SMOORE depụtara na HKEX (koodu nchekwa: 6969.HK)
• Ndi iF Design Award 2020
• Etinyere ihe karịrị 1600 Ikike nchọpụta Kemịkalụ
Tọrọ ntọala na 2006, SMOORE International Holdings Limited bụ National High-tech Enterprise na onye ndu ụwa ama ama na-enye azịza teknụzụ atomization. Ọ na-pụrụ iche na atomization technology dị ka nke ọma dị ka mmepe, n'ichepụta na ahịa nke seramiiki eduzi.
SMOORE na-etinye oke mkpa R&D na ihe ọhụrụ. Mụ na ndị isi na-agụsị akwụkwọ na mahadum dị elu dị ka Georgia Institute of Technology, Mahadum Purdue, Mahadum Tsinghua, na Mahadum Sayensị nke China, ugbu a nwere ihe karịrị 1600 patents patent n'ụwa niile, na-ekpuchi ọtụtụ mpaghara dịka ndị na-eduzi seramiiki na elektrik.
Ekele maka teknụzụ atomization na-enweghị isi, ngwaahịa SMOORE enwetala asambodo WM, RBA, EICC, BSCI, GMP, cGMP na TUV ma ebupụla ya na mba 50 na mpaghara gburugburu ụwa. N'ịga n'ihu na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu, SMOORE aghọwo usoro ikpo okwu atomization na-eduga ụwa, nke ndị ọrụ njedebe nabatara ma nwee mmasị na ya.
Site na teknụzụ R&D dị elu, ikike nrụpụta siri ike, pọtụfoliyo ngwaahịa dị iche iche na ntọala ndị ahịa dị iche iche, dị ka Frost & Sullivan si kwuo, SMOORE bụ onye nrụpụta ngwa ọrụ kachasị elu n'ụwa n'ihe gbasara ego ha nwetara, na-aza 16.5% nke ngụkọta ahịa, na 2019.
Kwalite Pod Ngwọta
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Sitemap - AMP Ekwentị
Kpoo Sịga, E Liquid Alụlụụ Sịga, E Sịga ọnya Pack, Okingụ Sịga Ọzọ, Epen, Newport E sịga,